Koox hubaysan oo Muqdisho ku dhaawacay xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamada ciidamada DFS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKoox hubaysan oo Muqdisho ku dhaawacay xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamada ciidamada DFS
Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada federaalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xuseen Maxamed (Mayoonge).
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxo hubaysan oo gaari wata ayaa degmada Wardhiigley ku dhaawacay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada federaalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xuseen Maxamed (Mayoonge), sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Sida ay sheegeen goobjoogayaasha kooxda hubaysan ayaa gaariga ay wateen ku hor-gooyay gaariga xeer ilaaliye ku xigeenka iyagoo saraas ku furay, waxaana weerarka ku dhintay darawalkii xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamada ciidamada.
Dhaawaca xeer ilaaliye ku xigeenka ayaa loola cararay mid kamid ah isbitaalada Muqdisho.
Ma jirto cid si dhaqso ah u sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa horey weeraro kan lamid ah oo ka dhan ah saraakiisha dowlada u qaaday.
September 21, 2016 Sarkaal katirsan haayada nabadsugida DFS oo ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Garowe-(Puntland Mirror) At least 26 of Al-Shabab fighters at the Garowe prison have been transferred to the Mogadishu on Wednesday, according to the official. A security official, who asked not to be named, told to [...]